Kungase kuyishubele iPirates emidlalweni ezayo yeDStv Premiership - Impempe
Kungase kuyishubele iPirates emidlalweni ezayo yeDStv Premiership
UNtsikelelo Nyauza we-Orlando Pirates ezama ukudlula kuReeve Frosler weKaizer Chiefs ngeSonto
Kubukeka kuzoba wumqansa kakhulu kwi-Orlando Pirates emidlalweni emihlanu ezayo yeDStv Premiership njengoba ilahle amaphuzu emdlalweni wangempelasonto.
IBucs ishaywe yiKaizer Chiefs ngeSonto emdlalweni weligi ophele ngo 1-0 eFNB Stadium. Kube nguSamir Nurkovic ophule izinhliziyo zeZimnyama ngokushaya uqethu wegoli ogcine uphele ngalo umdlalo. Ngemuva komdlalo umqeqeshi weBucs uJozef Zinnbauer ukhale kakhulu ngokulahla amaphuzu nokudedela igoli akholwa ukuthi bebengalivimba.
Ngemuva kwalo mdlalo wangeSonto kuqale ikhefu lemidlalo yeFifa njengoba amazwe ezobe edlala imidlalo yokuhlunga cisho emhlabeni wonke. Ukushaywa kwePirates kwenze yahluleka ukuvala igebe phakathi kwayo neMamelodi Sundowns ebambane ngo 1-1 neBlack Leoprads ngalo iSonto.
“Ngiphoxekile ngokuthi silahle amaphuzu namuhla. Kodwa njengamanje into ebalulekile ukuthi sinemidlalo eyisishiyagalolunye okumele siyidlale. Kumele silwele amaphuzu, yilokho okubalulekile kimina hhayi ukunaka iSundowns. Bekungaba kuhle ukuthi siye ekhefini sihleli endaweni yesibili,” kusho uZinnabauer ngemuva komdlalo weChiefs.
Njengamanje iPirates isendaweni yesine ngamaphuzu angu-35, kanti isele ngamaphuzu amahlanu kwiSundowns enawu-40. Inkinga enkulu kunazo zonke ukuthi iSundowns isadlale imidlalo engu-18 kanti iPirates seyidlale engu-21.
Imidlalo emihlanu elandelayo yePirates ikhombisa ukuthi kuzoyishubela kakhulu kwiligi uma seyibuya imidlalo. Ngo-Ephreli 7 izokwamukela iMaritzburg United, esanda kubuyelwa yifomu yayo, e-Orlando Stadium. Ngemuva kwalokho izobhekana neSwallows FC eDobsonville Stadium, ngo-Ephreli 24. Nokho ngaphambi kwalo mdlalo izodlala owe-quarterfinal yeNedbank Cup neSundowns ngo-Ephreli 15.
Izobe seyamukela iSundowns koweligi e-Orlando Stadium ngoMeyi 2. Emdlalweni ozolandela lowo izobhekana neLeopards khona e-Orlando Stadium, kuthi ngoMeyi 11 ivakashele iStellenbosch FC eDanie Craven Stadium. Ngemuva kwale midlalo izobe isisele nemidlalo emine kuphela yeligi.
Le midlalo emihlanu yeligi ezodlalwa yiBucs kubukeka kuyiyona engase icacise mayelana namathuba ayo okuwina isicoco seligi esibukeka singase sikhale semuke neSundowns.
Previous Previous post: LISENETHINI!: Lidinga ukubunjwa ngesineke iqembu elizowina iligi
Next Next post: U-AK 47 akayiniki lutho iPirates koweNedbank Cup ezowudlala neDowns